Kuhle amafilimu nge Bryusom Uillisom. Njengoba zibizwa ngokuthi ama kumdlali
Ama-movie ne Bryusom Uillisom bheka bese ubukeza amakhasi cishe bonke abathandi izinga bomlilo okuvusa usinga. Ngokweyame ezinhlinzekweni umlingisi odumile nezinye izinhlobo: amahlaya, yesayensi, idrama. Ukuze wakhe eminyakeni engu-60, wakwazi ukuba udlale 100 imidwebo, phakathi okuyinto eziningi egqamile, sikhumbuleke ifilimu amaphrojekthi. Iyiphi indima, inkanyezi ukusebenza akunakubangelwa okungcono?
Ama-movie ne Bryusom Uillisom: nokuzidela
Kukhona movie bamfune ngisho emehlweni izilaleli, ukugwema izithombe ezimatasa. "Die Hard" - iphrojekthi ifilimu, okuyinto kwaba nendima ebaluleke kakhulu ngoba indima nomdlali abanamakhono. Ingxenye yokuqala yanyatheliswa ngo-1988, sinikezelwa emaphoyiseni abanesibindi McClain, ngubani waphoqeleka ukuba udedele labayisibambiso abakuphila kwabo kusengozini ngenxa abashokobezi.
Inguqulo yakamuva sehlelo isinyathelo movie "Die Hard", lapho indima wezwe waya Bruce Willis, wadedelwa ngo-2013. Umdwebo Kuyathakazelisa ukuthi ekulweni izigebengu, protagonist kusiza esekhulile indodana.
"Armagedoni" - eqanjiwe Thriller, baba litholakale emphakathini ngo-1988. Izwe usengozini futhi, kodwa wayengabhekiseli esongelwa amaphekula, kanye netshe elisemkhathini omkhulu, rocket hurtling maqondana iplanethi yethu. Izindlela kuphela ukuyimisa, okuyinto kubonakala phambi namaqhawe - ibhomu.
"Umtfumbu Fiction" - brainchild yemikhuba yehlelo Quentin Tarantino sika neyaziwayo ngokushesha emva kokukhululwa ngo-1994. Indima Bryusa Uillisa efana izithameli Ukungaqiniseki zabo ngokuphelele. Le filimu impikiswano ayenakho Ihlanganisa umfanekiso boxer Butch, ephethwe ukungena ezingqubuzana mafia. Usuku lwaqala esibi kakhulu, waqhubeka ukubulala abantu abathathu.
Isitayela dystopia "Monkeys 12", owasungulwa ngo-1995, kuye kwabonisa waphinda indlela ezingalindelekile kungaba amafilimu nge Bryusom Uillisom. The hero liyasuswa Ngokuzayo namuhla, ukuvimbela ukusabalala igciwane azichithile ingxenye enkulu yesintu.
In the movie "The Sixth Sense" Bryus Uillis is ophindukuzalwa futhi, kulokhu wayengumuntu Udokotela wezifo zengqondo owelapha ezama ukusiza ingane eneminyaka engu-ubudala. Umfana has a ikhono uyathusa - angakwazi ukuxhumana nabafileyo. Voltage akavumeli izethameli phansi umphumela ongalindelekile.
Comedy ne Bryusom Uillisom
"Bonke Nine Yards" - comedy, amandla nezinto zethu esingazisebenzisa ukuncoma wonke umuntu ufuna izindlela insini. Ama-movie ne Bryusom Uillisom ngokuvamile aqukethe izakhi abamahlaya, ngisho noma basonta izinhlobo ezahlukene ngokuphelele. Lesi sikhathi umlingisi uzama indima owayebulele, okuyinto has a charm ezingavamile. Tape siyadingeka ukuze yokubuka bonke abathandi black amahlaya. Bruce wavelelwa Ngohlelo kamnandi nomphathi Mathewu Perry, odlala indima udokotela wamazinyo, ngephutha sabanjwa phakathi isinyathelo ngenxa umakhelwane wakhe ongavamile.
"Ukufa Siyaphakama Yakhe" - omunye yobuciko ifilimu nge izinkanyezi eziyokhanga abalandeli amahlaya ezicashile. Bruce uzama umfanekiso udokotela ukulondoloza ubuhlobo ne izintokazi ezimbili. Bobabili laba besifazane baphupha isandiso bobusha. Comedy mangaza abalandeli, ejwayele ukubukela Willis e indima iqhawe abanesibindi. Yena lolungenamaphutsa ukhombisa ababuthakathaka nginenhliziyo umuntu osesilinganisweni.
Fiction nge Bryusom Uillisom
"The Fifth elementi" - isithombe kulabo ngifuna lula bezijabulisa ifilimu leprojekthi, hhayi ngaphandle ngesikhathi esifanayo subtext zefilosofi. Lesi sikhathi hero Willis futhi baphathiswa umsebenzi obaluleke kakhulu - ukuvimbela inhlekelele yembulunga yonke. Ngu Umhlaba ngokuqiniseka esondela okubi, ukuthatha uhlobo mass red-hot. Izinhlamvu main kufanele ubhekane naso, okuyilona elidingekayo kuphela ukubeka ndawonye izakhi ezine, futhi uthole yesihlanu.
Ingabe ukusinda lapho uzungeze abantu dlulisa Ukuphahlazeka isitimela? Hero "Unbreakable" musa ke, akazange nje ukusinda, kodwa musa ngisho bayalimala. ukuziphatha Waphezulu ayivumelaniswa kunalokho ukusola angaphezu kwawemvelo esivela umlingisi Bryusa Uillisa. Kwenzekani uma kukhona omelene protagonist enezimfanelo obuhlukile?
Drama nge Bryusom Uillisom
Akubona bonke uqaphele ukuthi lowo umlingisi odumile uyakwazi ukubhekana kahle nesimo indima ezijulile. Ukuze kufakazela lokhu, ukunika isikhathi esanele ukubukeza tape, "Indaba Nathi." Le projekthi ifilimu elingenalo izimfanelo ezifana inhlekelele yomhlaba wonke, ingozi, ukuzibulala. Uzungu kugxile indaba uthando, kubahlanganyeli okuyizinto ubunjalo Willis futhi Heroine of yakhe co-inkanyezi Mishel Pfayfer.
Kuyinto curious kakhulu ukuba bagcine ubuhlobo umbhangqwana uye bekipitile-15. iseli emphakathini sisonqenqemeni ekubhujisweni, njengoba womabili nommeleli wayo ucabanga ngesehlukaniso. Le filimu kuyinto enhle ukuba abukwe inkampani zesifazane.
Ama-movie ne Bryusom Uillisom liphethwe izinhlobo ezihlukahlukene zomculo. Nokho, cishe bonke of them are okuthakazelisayo, ashukumisayo futhi zijabulisa. Ngokuvamile izibukeli ezimi, kubandakanya noma iyiphi isithombe kusuka Kulolu hlu olungenhla, nesikhathi omkhulu.
Doll Chucky: Isilo esinganqobeki obomvu
Chemberlin Kevin phakathi esiteji futhi esikrinini esikhulu
"Unessennye Wind": nabalingisi. "Gone ne-Wind" - Classic cinema emhlabeni
Aleksandr Yanvarev - Biography nemisebenzi
Umlingisikazi Anna Shepeleva: amaqiniso biography, umsebenzi kanye ezithakazelisayo
Magnificent lesikhumbuzo Christian - iBandla likaNkulunkulu e Tsaritsyno
Kungani eziqhakaza violets? Izizathu eziyinhloko
Prince Oleg: Biography of the umsunguli kwamandla Old Russian
Izimpawu zomdlavuza webele
Yini benze izindawo abomvu ngaphansi kwamehlo.
Fiberglass for Umdwebo - kuyini
Processor isokhethi AM2: izilimi, ezibekiweko lobuchwepheshe kanye lizinga lekuphumelela
Russian Black Sea Fleet: ukwakheka kanye nohlu imikhumbi
Kungani tattoo ethandwa kangaka ehlombe lakhe
Indlela ubuyekeze anti-virus Eset NOD32: izindlela eziyisisekelo
Kubonakala sengathi i-inkawu encane nomndeni clawed?